5 Askari oo lagu dilay Weerar ka dhacay magaalada Mandera | SAHAN ONLINE
5 Askari oo lagu dilay Weerar ka dhacay magaalada Mandera
NAIROBI – Koox hubeysan ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada Booliska dalka Kenya xili ay ku sugnaayeen tuulada Fino ee Mandera.
Weerarkan oo dhacay gelinkii dambe ee xalay ayaa lagu dilay shank amid ah ciidamada Booliska ee saldhiga ku sugnaa,waxaana sidoo kale weerarka lagu dhaawacay saddex kale oo ka tirsan isla Booliska Fino.
Guddoomiye Kuxigeenka Ammaanka ee deegaanka Lafey Eric Oronye ayaa sheegay in kooxda weerarka soo qaaday markii hore jareen anteenadii Isgaarsiinta ee tuulada Fino,taasoo keentay in Booliska Mandera aysan ka warhelin weerarka.
Mr Oronye ayaa sidoo kale sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay ka badnaayeen konton qof,kuwaasoo lugeynayay.
Majirto illaa hadda cid sheegatay mas’uuliyada weerarka balse maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa dhowr jeer ooh ore weeraro uga geystay deegaano hoostaga Mandera.
Weerarkan ayaa kusoo aadaya laba todobaad kadib markii koox hubaysan ay weerar ku qaadeen macalimiin wax ka dhigayay deegaanka Qarsaa ee ka tirsan Wajeer,halkaas oo lagu dilay saddex macalin ,kuwaasoo kasoo jeeday qeybaha kale ee dalka Kenya,halka hal macalin lagu dhaawacay.